ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူး ရှိ ရောင်းရန် Land For Sale in Bago (ID-305), ခြံ ၊ မြေကွက် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ခြံ ၊ မြေကွက် - Land For Sale in Bago (ID-305)
Land for sale in Bago Industrial Zone , Bago.
Land area -5Acres , grant land.
Asking price for one acre is - 1500 Lakhs (Nego)
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူး စက်မှု့ဇုန်ရှိ ရောင်းရန် မြေဖြစ်သည်။
မြေအကျယ် - ၅ ဧက ရှိသည်။ ဂရန်မြေ ဖြစ်သည်။
ရောင်းရန် ဈေးနှုန်း - ၁၅၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ပဲခူးရှိ ရောင်းရန် မြေ (ID-305)
Property ID: S-1189582
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Land For Sale in Bago (ID-305)
Shweproperty ID: S-1189582